Mmalite Mobility nke Naijiria nke Treepz nwetara $2.8M wee nweta Ugabus maka Mgbasawanye East Africa
N'ịkwado ịmegharị usoro njem ọha na eze ma weta nhọrọ njem dị mma, ntụkwasị obi na nke dị mma n'ofe Africa, ụlọ ọrụ na-ekekọrịta ihe na Toronto, Treepz, ekwupụtala na ya nwetara ụlọ ọrụ ụgbọ ala Uganda yiri nke ahụ. Ugabus.
Treepz tọrọ ntọala na 2019 ma na-arụ ọrụ ugbu a na Nigeria na Ghana. Ọ bụ naanị ikpo okwu na-eji teknụzụ na-eme ka usoro njem ụgbọ njem na-arụ ọrụ.
Treepz na-arụ ọrụ n'elu ikpo okwu dijitalụ na-enye ndị njem ohere ịnya ụgbọ ala kwa ụbọchị n'okporo ụzọ a kapịrị ọnụ n'ime Lagos na Accra.
Ha na-ejekwa ozi dị ka onye nchịkọta maka ụlọ ọrụ njem ụgbọ ala karịrị iri na abụọ gụnyere ndị dị ka GUO, Efex Executive, Libra Motors, ABC Transport bụ ndị na-ebuga ndị ahịa na Treepz gafee obodo iri abụọ na otu na Naijiria n'ime ọnwa isii gara aga kemgbe ha malitere ngwaahịa a.
Ndị na-ahụ maka ụgbọ njem nwere ike iji usoro ụgbọ ala ha nke ọma ugbu a site na iji onyinye na ọrụ ndị Treepz dochie ọrụ ntuziaka na tiketi.
Ugabus malitere na 2016 ma ugbu a nwere 70% nke ndị ọrụ ụgbọ ala niile na mba East Africa n'elu ikpo okwu ya na teknụzụ ego ekwentị maka ịkwụ ụgwọ dị mfe.
Ronald Hakiza, CEO & Co-Founder nke Ugabus na Onyeka Akumah, CEO & Co-founder, Treepz N'ikwu okwu na nkwekọrịta nnweta, onye isi na onye na-arụ ọrụ Treepz, Onyeka Akumah kwuru, sị, 'Onye ọ bụla nọ na Treepz na-enwe obi ụtọ ịnabata ndị otu ahụ. na Ugabus gaa na ezinụlọ Treepz.
Nke a na-arụ ọrụ ruo oge ụfọdụ, yana nkwekọrịta anyị mere na Ghana ọnwa ole na ole gara aga, ya mere, anyị nwere obi ụtọ n'ezie imechi nkwekọrịta ahụ nke ọma.
East Africa bụ ihe na-akpali akpali maka Treepz na site na Uganda, anyị ga-arụkọ ọrụ na ndị otu ọhụrụ a Hakiza na Uganda na-eduzi iji nyochaa atụmatụ uto anyị n'ofe mba ndị agbata obi ka anyị na-achọ ịmepụta usoro mgbasa ozi na-emekọrịta ihe na Sub Saharan Africa. "
Treepz niile dị n'otu ngwa na-enye ndị njem ohere ịchọ, atụnyere na akwụkwọ ịnya ụgbọ ala n'ime obodo na site n'otu obodo gaa na nke ọzọ, dị mma site na ntụsara ahụ nke ụlọ ha.
Nkà na ụzụ gbadoro ụkwụ n'etiti obodo Ugabus, na-emeju ihe nlereanya Treepz na-aga n'ihu iji weta njem ọha na-achọsi ike yana njem njem na mpaghara ọhụrụ n'Africa gụnyere teknụzụ ego ekwentị.
“Anyị na-eche nnọọ banyere otú ndị mmadụ si esi n’otu obodo gaa n’ọzọ, anyị gbalịkwara ike anyị niile wuo ụlọ
ngwa ntinye akwụkwọ ụgbọ ala ntụkwasị obi na Uganda.
Ugbu a, anyị na-esonyere ezinụlọ TREEPZ iji mezuo ọhụụ buru ibu-nke anyị chere na anyị nwere ike imezu nke ọma na TREEPZ.
Anyị maara ma kwanyere ùgwù nke ndị otu ntọala Onyeka Akumah na-edu na taa, anyị nwere nnọọ obi ụtọ na anyị ga-abụ ọsụ ụzọ na-eto eto azụmahịa nke Treepz na East Africa malite na Uganda." Ronald Hakiza, CEO na onye guzobere Ugabus kwuru.
Ekpugheghị kpọmkwem usoro nkwekọrịta ahụ, mana nnweta 100% ga-ahụ Treepz n'ụzọ dị egwu ịgbatị akara ala ya na East Africa, n'ihi na Ugabus na-arụ ọrụ n'obodo niile dị na Uganda.
A ga-akpọgharị Ugabus dị ka Treepz Uganda ma malite ọrụ na 1st nke Disemba 2021 site na nkwado nke Gọọmenti Uganda na-atụ anya ụbọchị ahụ.
Ọzọkwa, Ronald Hakiza bụ onye isi oche nke Ugabus ga-aghọzi onye njikwa obodo maka Treepz Uganda ma na-ebute ndị otu ya iji kwado atụmatụ uto azụmahịa.
Na mgbakwunye na ịgbasawanye n'ahịa ọhụrụ na iwulite njem njem kachasị ukwuu na Africa, Treepz ekwupụtala taa nke a na-ebuli $ 1.6 nde USD ọzọ na ego mkpụrụ ego na ndị na-etinye ego ọhụrụ na-abata.
Companylọ ọrụ a emechiela mkpụrụ nke ndenye aha ya nke ọma mgbe ọ nwelitechara ngụkọta nke $2.8 nde USD n'ime ọnwa atọ gara aga malite na Ọgọstụ 3 mgbe ejiri ego $2021 nde kwupụta mkpụrụ ha gburugburu.
Ọganihu dị egwu na Treepz adọtakwala ndị otu na Google anya site na ntinye ego sitere na Google Africa Black Innovation Funds ekwuputara na Ọktoba 2021.
Dị ka Onyeka si kwuo, mmalite nke afọ 2 ga-eji ego ndị a niile na-emewanyewanyewanye ya.
ọrụ ịnya ụgbọ ala chọrọ na ọrụ tiketi ụgbọ ala n'ime obodo n'Africa.
Ndị ọchụnta ego ọhụrụ na-esonye na okirikiri gụnyere Japanese VC, Uncovered Fund yana ndị isi ụlọ ọrụ Dubai dabere na Blanford Capital na Jonomi Capital. Ọzọkwa, ego sitere na Egypt, Jedar Capital sonye na gburugburu na ntinye ego na-esochi site n'aka ndị investors gara aga.
Dabere na Takuma Terakubo, CEO & General Partner of Uncovered Fund Inc, ọ tụlere itinye ego ha wee sị, "Treepz emetụla anyị aka site na nhụsianya ha dị ịrịba ama na njedebe nke afọ ma dị njikere maka mgbasawanye ọzọ, karịsịa site na mmekorita. Treepz na-ewu akụrụngwa ngagharị kachasị mkpa na obodo ukwu Africa.
Mmepe nke njem njem ọha dị mkpa na mba Africa ebe ime obodo na-aga n'ihu.
Anyị na-atụ anya iwulite akụrụngwa maka njem ndị mmadụ site na uru dijitalụ. Dịka VC Japanese nke na-etinye ihe dị mkpa na ụlọ ọrụ ngagharị, anyị ga-achọ ịnye ha nnukwu uru. "
N'ikwu okwu banyere itinye ego, Ntọala General Partner, Jedar Capital, Sherif Nessim nwere nke a ikwu;
“Obi dị m ụtọ na m na-akwado Onyeka na ndị otu treepz na ebumnuche ha imezi njem njem kwa ụbọchị maka ndị Africa.
Aha Onyeka dị ka onye ọchụnta ego na-emeri ihe nrite na onye bụbu onye nchoputa mmalite mmalite na-aga nke ọma yana otu ndị siri ike mere ka m kwenye na nke a bụ otu lekwasịrị anya n'ịmepụta nnukwu ọhụụ iji bụrụ onye na-ahụ maka njem na njem njem n'Africa, na-akwado na - obodo na ime obodo na-eme njem maka ndị Africa ebe ọtụtụ na-adabere na njem na mba ndị agbata obi maka ọrụ kwa ụbọchị, agba a ga-enyere ha aka ịkwalite ma kwalite atụmatụ mgbasawanye ha na West na East Africa ma ejiri m n'aka na ha ga-aga n'ihu na-eto eto na mpaghara ndị a. ọnwa 12-18 na-abịa."
Treepz ugbu a bụ otu n'ime mmalite mmalite ngagharị na Africa n'ime naanị afọ 2 kemgbe mmalite na Nigeria lekwasịrị anya n'ịkwalite sistemu ụgbọ njem ọha na-amalite site na bọs.
Site na ọnụnọ ya na Nigeria, Ghana na ugbu a Uganda, mmalite ahụ na-akwalite ọkachamara mpaghara, ihe ngwọta ya na-elekwasị anya na nkà na ụzụ, otu ndị isi ọchịchị siri ike na mmekọrịta gọọmenti na-achịkwa nke ọma n'ofe Africa iji nyochaa ohere njem n'otu mba n'otu oge.
Onyonyo ewepụtara: Ndị otu-guzobere Treepz na Ugabus bịanyere aka na nkwekọrịta ahụ